Rut 3 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
3 N’ase Naomi ka kyerɛɛ no sɛ: “Me ba, ɛsɛ sɛ mehwehwɛ homebea+ ma wo, na asi wo yiye. 2 Boas a wo ne ne mmabaa yɛ adwuma no, ɔnyɛ yɛn ho nipa+ anaa? Hwɛ, obehuw+ atoko so wɔ awiporowbea hɔ anwummere yi. 3 Enti guare fa ngo sra+ na hyɛ w’atade,+ na kɔ awiporowbea hɔ. Mma ɔbarima no nnhu wo kosi sɛ obedidi na wanom awie. 4 Sɛ ɔkɔda a, hwɛ faako a ɔbɛda, na koyi ne nan ho ntama na da hɔ; na ɔno ara bɛkyerɛ wo nea ɛsɛ sɛ woyɛ.” 5 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nea woaka biara mɛyɛ.” 6 Na osiim kɔɔ awiporowbea hɔ kɔyɛɛ nea n’ase ka kyerɛɛ no no nyinaa. 7 Ɛbae sɛ bere a Boas adidi na wanom ama n’ani agye+ ne komam no, ɔkɔdaa atoko a wɔaboa ano no akyi. Na ɔbea no yɛɛ brɛoo koyii ne nan ho ntama daa hɔ. 8 Na ɔdasum no, ɔbarima no bɔɔ birim, na ɔmaa ne mu so. Ɔbɛhwɛ a, ɔbea bi na ɔda n’anafo yi! 9 Ɛnna ose: “Hena ni?” Na obuae sɛ: “Ɛyɛ me, w’afenaa Rut; trɛw wo ntama mu kata w’afenaa so, efisɛ woyɛ abusua mu ogyefo.”+ 10 Na ɔkae sɛ: “Yehowa nhyira wo,+ me ba. Adɔe+ a woada no adi nnɛ yi sen kan de no+ koraa, efisɛ woankodi mmerante akyi, sɛ́ wɔyɛ ahiafo anaa asikafo. 11 Na afei me ba, nsuro. Nea wobɛka biara mɛyɛ ama wo,+ efisɛ kurom hafo nyinaa nim sɛ woyɛ ɔbea pa.+ 12 Ɛwom sɛ meyɛ abusua mu ogyefo+ ampa de, nanso ogyefo bi wɔ hɔ a ɔbɛn sen me.+ 13 Da ha anadwo yi, na ade kye anɔpa na sɛ obegye+ wo a, eye, ma onnye wo! Na ɔmpɛ sɛ ogye wo nso a, ɛnde sɛ Yehowa te ase yi,+ me na megye wo. Da ha ma ade nkye.” 14 Enti ɔdaa n’anafo kosii anɔpa, na ɔsɔree no, na anim ntetewee a obi behu no. Afei ɔbarima no kae sɛ: “Mma obiara nnhu sɛ ɔbea bi baa awiporowbea ha.”+ 15 Na ɔka kaa ho sɛ: “Fa wo nkataso no bra na trɛw mu.” Enti ɔtrɛw mu, na osusuw atoko susukora asia guu mu de soaa no, na ɔbarima no siim kɔɔ kurom. 16 Na ababaa no sii kwan so kɔɔ n’ase hɔ, na n’ase no kae sɛ: “Me ba, wuni?” Ɛnna ɔkaa nea ɔbarima no yɛe no nyinaa kyerɛɛ no. 17 Na ɔkae sɛ: “Ɔbarima no ka kyerɛɛ me sɛ, ‘Mfa nsapan nkɔ w’ase hɔ,’ enti na ɔmaa me atoko susukora asia yi.”+ 18 Ɛnna ɔno nso kae sɛ: “Me ba, tena ase twɛn kosi sɛ wubehu sɛnea asɛm no besi, na ɔbarima no ho rentɔ no kosi sɛ obedi asɛm no ho dwuma awie nnɛ.”+